Ebe a na-eme ihe nkiri na Wax, na Madrid | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Madrid, Ihe ị ga-ahụ
Ọ bụrụ na ị na-adịghị amasị oge gboo ngosi ihe mgbe ochie ma kama obere, mbụ, peculiar omume, mgbe ahụ na gị ọzọ njem Madrid akwụsịla ileta ndị Wax Museum. Knowsnye maara ihe kpatara ọnụ ọgụgụ ndị na-ese ihe, ndị mmadụ na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ji ewepụta nnukwu mmasị.
Muselọ ihe ngosi nka dị na isi obodo Spanish, na mpaghara ebe mara mma, Recoletos Walk, na mmasị akụkọ ihe mere eme-nka, yabụ nleta ahụ na-atọ ụtọ ebe ọ bụla ịlere ya. Na-enwe!
Akụkọ ihe mere eme na-agwa anyị na amụrụ ihe ngosi nka na afọ ikpeazụ nke gọọmentị Franco, laa azụ 1972, n'aka onye mịnịsta na-ahụ maka mgbasa ozi na njem nleta n'oge ahụ, Sánchez Bella. Maka ọrụ ahụ, akpọbatala ndị otu cinematographic, ka ha nwee ike ịhọrọ ndị odide ma wughachi ọnọdụ, dịka ọmụmaatụ, na ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme maka ọnụọgụ ndị metụtara Spanish na mba ụwa.
Echiche bụ ịnọchite anya ndị ahụ ndị ama ama ama sinima, ihe nkiri, igosi azụmahịa ke ofụri ofụri, kamakwa sayensị, egwuregwu na akụkọ ihe mere eme. Ya mere, mbọ nke ndị na-ese ihe, ndị na-eme ihe etinyere na ndị ọkachamara na nsonaazụ pụrụ iche na akwa akwa, ndị na-achọ mma na ndị na-enye ihe ọkụ wee chịkọta iji nye ndụ ndị mbido mbụ ahụ mebere ma bụrụ akụkụ nke nchịkọta mbụ.
Taa enwere Onu ogugu 450 ka ima ma n’ezie a ga-enwe ụfọdụ ndị na-amasị gị karịa ndị ọzọ. Anyị nwere ike kewaa ọnụọgụ 450 na edemede dị iche iche: Arts na Sayensị, Egwuregwu, Ntụrụndụ, Childrenmụaka, Terjọ na akụkọ ihe mere eme.
N’ubi Nwata enwere ndi ochie dika Obere Ukwuu Red Red, ET, Johnny Deep na agwa ya si Pirates nke Caribbean na Bart simpson, ọmụmaatụ. Banyere Gosi ha bụ Leonardo Di Caprio, Marilyn Monroe, Justin Bieber, Tom Cruise ma ọ bụ Dwayne Johnson, n’etiti ndị ala ọzọ, na ndị Spen Plácido Domingo, Isabel Preysler, Sara Baras na Antonio Banderas. Tinye Sofía Vergara ma inwere otutu onu ogugu ama ama.
Maka Egwuregwu ahọrọ ihe ngosi nka Cristiano Ronaldo, Rafael Nadal, Mireia Belmonte, Marc Márquez, Javier Fernádez na ndị egwuregwu bọọlụ Spanish. Maka udi nke oké ụjọ anyị nwere nnukwu anụ na ihe e kere eke na-nyere anyị mgbe ma ọ bụ obere ụjọ: ihe e kere eke nke Frankenstein, Pennywise (ugbu a, Ọ bụ ọnụma niile maka fim abụọ ahụ), Dọkịnta Knox na Werewolf.
Otu n'ime edemede ndị kachasị amasị m bụ nke akụkọ ihe mere eme n'ihi na ihu na-apụta site na ihe osise kachasị mma iji nye ọdịdị na ọdịdị nke ndị ahụ dị mkpa n'akụkọ ihe mere eme. Enwere onu ogugu nke Carlos nke V, ndị nke Ndị Katọlik Katọlik, Blas de Lezo, Napoleon, Cleopatra na Felipe Isii ịghara ịlụ ọgụ na nke ugbu a.
Maka udi nke Sayensị na Art ndị a họpụtara abụwo Miguel de Cervates, Margarta Salas ntụrụndụ nke Mee 3 agbapụ, nzuko edemede na nnukwu Pablo Picasso. Ma na mgbakwunye na ọnụ ọgụgụ nke wax, nke bụ isi nke ụlọ ngosi ihe nka, ụlọ ọrụ ahụ na-enye ọtụtụ ihe. Iji maa atụ, taa ị nwere ike ịga a Oge echiche nke Pablo Raijenstein onye, ​​ya na Lorena Toré, ya na enigmas n'agbata onu ogugu.
Ndị a "sessions" bụ naanị maka mmadụ 20 na ha pụrụ iche n'ezie? The nkiri nkiri bụ The Mentalist na Edward Norton na-amasị gị? Ọfọn, ọ bụrụ na ịchọrọ ịmeghachi ihe ndị mmadụ narị afọ nke iri na itoolu chere na ihe ndị ahụ dị ịtụnanya na-egosi na ọ bụ ezigbo ohere. Will ga-agagharị na ụlọ ebe a na-edebe ihe mgbe ochie n’ọchịchịrị, ya na ọwa ọkụ ma ọhaneze.ma ọ bụ, ihe dị ka nkeji 80. Jụụ! Na Septemba a, ụbọchị ndị a bụ Fraịde 13, Satọdee 14, Fraịde 20 na Satọdee 21st, na Fraịdee 27 na Satọdee 28 na 21: 10 pm, n'ozuzu, ọ bụ ezie na Satọde enwere ọrụ ọzọ na-esonye na 45: XNUMX mgbede
N'aka nke ọzọ, ọnwa nke Ọktoba na-ewetakwa nke ya na ebe ngosi nka. Halloween! N’agbata ọnwa iri abụọ na asaa ruo iri atọ na otu n’oge ụfọdụ, ụfọdụ ndị egwu ga-adị ndụ. Ihe nkiri ahụ laghachikwara Ihe ngosi Halloween, na Multivision ụlọ, na a fabulous remake nke Thriller. Debe na October 27, 28 na 31. Echefukwana! Ọbụna karịa, n'abalị nke 31st site na 8 ruo 12 pm e nwere 2 x 1 n'ọnụ ụzọ izugbe.
Ruo ugbu a nseta ihuenyo nke kacha mma nke ihe ngosi nka. Ugbu a ntakịrị ihe ọmụma a kapịrị ọnụ. Kedu ka esi hazie ụlọ ebe ndebe ihe a? Na Isi ala ị nwere Osisi Osisi Osimiri nke gụnyere Alaeze Ukwu Rom, Visigoths, Al-Andalus, Austrias, Bourbons na Contemporary Age. Also nwekwara Main Gallery ya na ndi Ezin’ulo, ndi nke gbara nke May 3, ndi Lọ Ihe osise, Otu n'ime Ndị na-anya ụgbọ mmiri, na Mmeri nke Peru na Mexico, doro anya Characters ndị America na ọtụtụ ihe ndị ọzọ, ọnụ ọgụgụ nke Felipe II, na Plaza de Toros, ngalaba nke ebe ọdịda anyanwụ, Sagrada Cena na Fantasy Nkuku.
El Trainzụ ụjọ gụnyere ulo mkporo, oke, shark, Ogige Jurassic, Star Wars na ebe obibi galactic, ihe sitere na Vietnam War na Oké ọgba aghara PennywiAma m. Na mezzanine n'ala nke ihe ngosi nka bu Osisi Mpụ na ama Freddy Krueger, Njụta Oku ya na mmekpa ahụ, ndị ohi dị ize ndụ, ndị omekome a ma ama na ndị Andalusia. Na Ala mbu, otutu uzo di.
Otu esi aga ebe ngosi nka? Ọ dị mma, adreesị ziri ezi bụ Paseo de Recoletos 41 ma ị nwere ike iru ebe ahụ site na metro, ụgbọ oloko, igwe ma ọ bụ ụgbọ ala. Line 4 nke metro bụ nke kachasị dị ka ọ na-enweta site na metro n'onwe ya. Thegbọ okporo ígwè kacha nso bụ ọdụ Cercanía de Recoletos na akara ụgbọ ala 27, 14, 5, 45, 53 na 150 na-ahapụ gị n'ógbè ahụ. Ogige 10 na Marqués de Ensenada 16 kwekọrọ na bicimad.
Kedu awa ole Madrid Museum Museum nwere? Ọ na-emepe ụbọchị ọ bụla n’afọ site na Mọnde ruo Fraịdee site na elekere iri nke ụtụtụ ruo elekere abụọ nke ehihie ma malitekwa n’elekere anọ nke ụtụtụ ruo elekere asatọ nke ehihie, na Satọdee, ụbọchị Sọnde na ezumike n’etiti 10 nke ụtụtụ na 2 elekere. Ego ole bụ mbanye? Kwa okenye, euro 21, afọ 65 karịa euro 14, ụmụaka site na 4 ruo 12 afọ, nwekwara euro 14, mana enwere nkwalite: mmadụ abụọ n'ịntanetị, euro 32, ezinụlọ abụọ toro eto + ụmụaka abụọ, euro 53, naanị n'ịntanetị na tiketi maka nnọkọ Uche ọ na-efu euro 18.
A ga-ebipụta tiketi n'ịntanetị, cheta na. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ezinụlọ buru ibu ma ọ bụ nwee nkwarụ, enwekwara ego na otu ma ọ bụrụ na ị nwere kaadị ndị ntorobịa ma ọ bụ kaadị ISIC. Rancezọ mbata nke ụgbọ oloko nke ụjọ, ọtụtụ na ebe nlegharị anya nke Simulator bụ n'efu maka ndị ọbịa ihe ngosi nka, mana ọ dabere na nnweta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » Madrid » Ebe Ndebe Ihe Omume dị na Madrid